Solar System Sizing and Design Course- Ngosipụta ihe ọmụmụ n'ịntanetị Kimroy Bailey Group
Igwe ngbanwe nke sisitemu ga - ejide aka gi n’ịghota ihe ike gi na udiri ogha na baturu n’enye gi ihe i choro.
SKU: KB-OC-004 Categories: Renewable Energy, Usoro nkuzi ume, Mbara Igwe nke Anyanwụ Tags: Ntaneti Ntaneti, Mbara Igwe nke Anyanwụ
Igwe ọkụ anyanwụ dị n 'usoro ihe ngosi bụ ụzọ ewebata sized sistemụ anwụ dị iche iche dabere na mkpa ike nke ndị ahịa gị. Nke a bụ mpaghara ọrụ ịmụ banyere anyanwụ mana ọ dị oke egwu. Ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ anyị na-ahụta ihe ọmụmụ a na-enye aka nke ukwuu n'ihi na anyị na-eji ụzọ izi ihe na ụzọ izi ozi eme ihe mgbe anyị ka na-edebe ọtụtụ ihe ọmụma n'ụzọ dị mfe.
Solar Sistem Ihu Igwe ga-agba mbọ hụ na ịgbanyeghị sistemu ma ọ bụ kpuchiri sistemụ gị ma ọ bụ ihe na - enweghị ike wee banye n'ọchịchịrị mgbe ịchọrọ ike gị. Igwe ngbanwe nke sisitemu ga - ejide aka gi n’icheta ihe banyere ike gi ma hu na inwere ike kwesiri inye gi ike di nkpa.
Ihe Akwadoro Nkwado
Igosi ike n’anyanwụ ole ị ga-eji nweta ike zuru ezu n’anyanwụ iji kpuchie ike ịchọrọ
Ole batri ole ị ga - achọ inwe usoro nchekwa nchekwa anyanwụ
Họrọ ihe njikwa Inverter na Charge kachasị mma dabere na ojiji ike
Nke a abụghị otu ihe dabara na ụdị niile makana ndị ahịa ga-enwe mkpa dịgasị iche iche site na nfe gaa na nhịkọ dabere na ụdị ike ha ga-achọrọ. Dịka ọkachamara nke anyanwụ ma ọ bụ onye mbido ụlọ ọrụ, ị ga-amụta nke ahụ Sistem Mbara Igwe enwere ike dị ukwuu dabere na ihe dịka nrụpụta nke nrụnye, ugbu a yana ọdịnihu ike ojiji yana oke na usoro ihe ndị dị na ya.
Gbakwunyere na teknụzụ ndị ọhụrụ na-eme ka ịbawanye arụmọrụ- ọ dị mkpa ịmụ isi mmalite nke sistemụ anwụrụ ọkụ ma na-anọnyere ọhụụ.
Echegbula, na -eme Sistem Mbara Igwe Sizing na-aghọ nnọọ mfe na usoro. ga-ahụ na ị ga-atụle ego ole ịchọrọ, nha nke ụlọ akụ batrị gị, ihe ndị dị na mbara igwe ga-atụle ma n'ikpeazụ nha waya iji jikọta iberibe niile.
Larkwụ na larkwụ Solar- Mụta otu esi eji obi ike wụnye usoro mbara igwe zuru ezu site na mbido ruo n'isi
1 nyochaa maka Mbara Igwe Igwe Solar na chepụta
Kimroy Bailey - July 8, 2018
ya sisitemu sisitemu sistem ga - ejide aka gị n’ịgụkọta ike gị ma hụ na ị nwere ike ọ bụla iji nye ike dị oke mkpa.